Mongolia, njem nlegharị anya | Akụkọ Njem
Mongolia, njem nlegharị anya
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, Asia njem
Lee anya na map ma chọta Mongolia na ya. Ekwela mgbagwoju anya na mpaghara ndị China, mana ọ bụ ebe ahụ, dị ezigbo nso. Mongolia bụ mba nwere oke osimiri mana enwere ndi agbata obi di ike dika China na Russia.
Nụla banyere Genghis Khan? Ọfọn, ọ bụ Mongolian na ọ bụ onye ndu nke otu alaeze dị oke mkpa. N'ezie, China nwere ndị eze Mongol. Ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya dị ntakịrị ma ọ bụ kemgbe 20 nke narị afọ gara aga ọ bụ mba kwụụrụ onwe ya ọ bụrụkwa na ị na-achọ ebe ndi ozo… Olee ihe i chere banyere nke a?
2 Otu esi aga Mongolia
3 Ihe ị ga-ahụ na Mongolia
Ọ bụ nnukwu obodo mana n'otu oge ahụ ọ nwere mmadụ ole na ole na-ebi kwa kilomita kilomita ọ bụla. Ọbụna taa ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-akwagharị na ndị na-akwagharị akwagharị na agbanyeghị na ndị ka n'ọnụ ọgụgụ bụ ndị agbụrụ Mongolian enwekwara agbụrụ pere mpe.
Ala ya na-achịkwa ndị Ọzara Gobi, ala ahịhịa na steepị. Nyịnya ya bụ ndị ama ama, ha na ha bụ Genghis Khan guzobere alaeze ya na ọ bụ otu n'ime ụmụ ụmụ ya onye guzobere Ọchịchị Yuan na China na Marco Polo na-ekwu maka akụkọ njem ya.
Ndị Mongol lụrụ Manchu agha ogologo oge, ndị ọzọ n'ime ndị bịara ịchị alaeze China, rue mgbe e mechara kewaa ókèala ahụ na Republic nwere onwe ya na mpaghara ndị China a na-akpọ Inner Mongolia taa.
Isi obodo ya bụ Ulaanbaatar, obodo oyi ma ọ bụrụ na enwere n'oge oyi. Ha nwere ike ime -45 ºC! N'ụzọ doro anya, ịgaghị n'oge oyi ọ gwụla ma ịchọrọ ịmuta ihe ndị mkpọrọ Stalin ga-enwerịrị na ndị a dọọrọ n'agha ... Mongolia akụ na ụba ya dabere na akụ sitere n'okike, kol, mmanụ na ọla kọpa.
Otu esi aga Mongolia
Ọdụ ụgbọ elu Genghis Khan dị ihe dị ka kilomita 18 na ndịda ọdịda anyanwụ nke Ulaanbaatar. Korean Air, Air China, Mongolian Airlines, Aeroflot ma ọ bụ Turkish na-enwe ụgbọ elu oge niile, n'etiti ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ya mere Nwere ike ibata site na ụgbọ elu si Germany, Japan, Hong Kong, Turkey, Russia na China ma site na njikọ nke ụwa ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị bụ kpakpando kwa e nwere ama Trans-Siberia Train, nke kasị ogologo n'ụwa. Site na Beijing ruo Saint Petersburg ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku kilomita asatọ na ọ bụ alaka Trans Mongol nke na-esi na ókèala Russia site na Ulaanbaatar ruo ókèala China. Lee njem! Ngụkọta 1.100 kilomita n'ogologo na-agba n'ime Mongolia. Na-eme njem a ụgbọ okporo ígwè bụ a oké ahụmahụ na ya onwe ya, n'ofè ebe. Ọ dị ka njem ị gara Ithaca.
Ọtụtụ ndị na-ahọrọ ịga njem njem Moscow - Ulaanbaatar - Beijing. N’agbata Moscow na Ulaanbaatar ọ bụ ụbọchị ise ma site na Beijing ruo Ulaanbaatar ọ bụ awa 36. Ngbanye ọ bụla nwere ụlọ itoolu nwere akwa anọ yana maka obere ego ị ga-enweta ụlọ ejima. A na-azụta tiketi n'ịntanetị site na saịtị www.eticket-ubtz.mn/mn ma a ga-azụta ya otu ọnwa tupu oge eruo.
Ma mgbe ịga Mongolia? Dị ka anyị kwuru oyi bụ nnọọ ihe ọjọọ. Ihu igwe ebe a dị oke ma anwụ na-acha mgbe niile ma nke ahụ dị mma. Mongolia na-enweta karịa ụbọchị 200 nke anwụ na-acha ka igwe ya wee na-acha anụnụ anụnụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ niile. A mara mma. Agbanyeghị oge njem nleta bụ site na Mee rue Septemba ọ bụ ezie na ị ga-eburu n’uche na ihu igwe dị iche dịka akụkụ nke mba ahụ. Mmiri na-ezo nke ukwuu site na July ruo August, Ee n'ezie.
Oge mara mma ịga Mongolia dị n'etiti ọnwa Julaị. Enwere ọtụtụ mmadụ mana ọ bara uru n'ihi na ọ bụ mgbe Ememme Naadam nke Mba nke anyi ga ekwu maka ya ma emechaa. N'ikpeazụ, ị chọrọ visa? Mba ụfọdụ anaghị, ma ha abụghị ndị ka n'ọnụ ọgụgụ. Agbanyeghị a na-edozi visa ahụ na ndị nnọchi anya mba na nke ndị consulas ma ọ bụrụ na ọdịghị otu na obodo gị, ị nwere ike itinye akwụkwọ maka otu na mba agbata obi na nke gị nke nwere ma ọ bụ nweta ya mgbe ị bịarutere, mana asụsụ ahụ gbagwojuru anya.
Nleta njem nleta bụ ụbọchị 30 ma ozugbo ị nwetara ya, ọ dị irè iji ya rụọ ọrụ n'ime ọnwa atọ ọzọ ka ewepụtara gị. N'ime usoro a, ha na-arịọ maka akwụkwọ ozi ịkpọ oku ọ bụrụ na ịga njem a haziri ahazi, ị ga-ajụ ndị ọrụ gị. Ruo mgbe ngwụcha afọ 2015, ewepụrụ mba ụfọdụ na visa mana ọ bụ iji kwalite njem (Spain dị na ndepụta ahụ), mana echere na nkwalite ahụ agwụlarị ya gosi ya tupu ịga njem.
Ihe ị ga-ahụ na Mongolia
N’ileghachi anya na Mongolia na eserese ngosi anyi nwere ike kee ya na mpaghara di iche iche dika okwu ndi kadinal si di. Isi obodo ahụ dị na mpaghara etiti ya, ọ ga-abụrịrị ọnụ ụzọ ámá gị yabụ nke a bụ ndepụta nke ihe ị ga-ahụ na Ulaanbaatar:
Ogige Sukhbaatar. Ọ bụ isi akụkụ na o nwere ihe oyiyi nke nwoke a n'etiti, onye ama ama ama ama ama. Gburugburu ya bụ Ballet na Opera aterlọ ihe nkiri, Palacelọ Omenala na nzuko omeiwu, dịka ọmụmaatụ.
Ebe obibi ndị mọnk Gandan. O nweela ọnọdụ ya kemgbe 1838 mana tupu ọ dị n'ime isi obodo. O toro nke ukwuu kemgbe ahụ ma taa, ọ nwere ụfọdụ ndị mọnk Buddhist 5. Okpukpe Buddha tara ahụhụ n'okpuru ọchịchị Kọmunist ma bibie ụlọ nsọ ise nke ebe obibi ndị mọnk ahụ. Site na ọdịda nke Soviet Union, ihe niile dị jụụ, e weghachiri ebe obibi ndị mọnk ma taa, ọ nwere ọtụtụ ndụ. O nwere Buddha mita 40 dị elu.
Nacional History Museum. Ọ bụ ihe kachasị mma iji mee ka akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ malite na Nkume Oge ruo na narị afọ nke XNUMX.
National Museum nke Natural History. Otu ihe ahụ, mana ịmara na omimi nke ahịhịa, anụmanụ na ọdịdị ala nke ala a dị anya. Okpukpo dainoso adighi,
Bogd Khan Obí Museum. Na ihu ọma ndị Soviet ebibighị ya na mkpochapụ mbibi ha duuru na 30s. Nke a bụ Bogd Khan Winter Obí ma taa ọ bụ ihe ngosi nka. Lọ ahụ bidoro na narị afọ nke XNUMX na Bogd Khan bụ eze ikpeazụ na Living Buddha. E nwere ụlọ arụsị isii mara mma na ubi ya.
Na nkenke, nke a bụ ihe obodo ahụ na-enye, mana na mpụga i nwere ike ịmata n'etiti ndị ọzọ ebe ndị na-esonụ:
Ogige Ugwu nke Bogd Khan. Ọ bụ n'ebe ndịda nke isi obodo na bụ n'ezie ugwu ugwu na ọgba drawings na a dịgasị iche iche nke osisi na ụmụ anụmanụ. N'ime ya bụ ebe obibi ndị mọnk ochie nke narị afọ nke 20 na ụlọ nsọ XNUMX na echiche dị ebube nke ndagwurugwu.
Gorkhi-Terelj National Park. Ọ dị kilomita 80 site na obodo ahụ ma na-enye ọtụtụ njem nlegharị anya dị ka njem, ịnya anyịnya, ịnyịnya ugwu na ndị ọzọ. Ọ bụ ndagwurugwu mara mma nke nwere usoro okike ndị na-adịghị mma, ugwu pine na-ekpuchi, na ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke okooko osisi.
Gun Galuut Nature Reserve. Ebe kacha mma ma ọ bụrụ na anụ ọhịa, ọdọ mmiri, ugwu, osimiri na swamps na-amasị gị. Ihe niile n'otu ndoputa.
Ebe nchekwa Nature Khustai. Ọ dị kilomita 95 site na isi obodo na ịnyịnya ọhịa ikpeazụ nọ n'ụwa bi. A na-akpọ ha ịnyịnya Przewalski, mgbe onye nyocha Polish hụrụ ha na 1878, na mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ nwụọ taa ha bụ ụdị echedoro.
N’isiokwu nke mbụ a banyere Mongolia anyị lekwasịrị anya n’inye gị ozi gbasara obodo ahụ, otu ị ga-esi ebe ahụ, ihe ịkwesiri ịbanye na ebe ndị njem kachasị na isi obodo na gburugburu ya. Mana dịka anyị kwuru, Mongolia buru ibu, yabụ na anyị ga-anọgide na-achọpụta ya ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Mongolia, njem nlegharị anya
Ndewo Mariela, kedu ka ị mere? Nke mbu, daalụ maka ihe edeturu na data ị na-ebipụta. Achọrọ m n'afọ ọzọ ịme trans-cyberian si Russia gaa Beijing (Moscow kpọmkwem) na m ga-achọ ịnọ ụbọchị ole na ole na Mongolia. Ma ihe masịrị m na Mongolia bụ ime njem ime obodo, nke dị anya site na obodo. Have nwere ozi ọzọ ọ bụla na nke a? Dị ka inwe ike ịma ụlọikwuu n'ụlọikwuu ndị a ma ama, ma ọ bụ ihe ndị yiri ya.
Daalụ n'ọdịnihu maka enyemaka gị. Edeelarị m ụbọchị dabara adaba ụbọchị iji gaa na leta nke nkwanye iji nwee ike ịbanye, isi data.
Ekele si Argentina.
Ihe ị ga-ahụ ma gaa na obodo Dublin
Afọ a gbapụrụ na Teruel ma ọ bụ Verona maka ụbọchị ịhụnanya na ịhụnanya gị